ရှေးဟောင်းသုတေ သန (Archaeology) ဆိုတာ – Live the Dream
ရှေးဟောင်းသုတေ သန (Archaeology) ဆိုတာ
ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်တဲ့ ရင်သပ် ရှုမောစရာ တိုင်းပြည်လေးတစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ဘယ်သူတွေဖော်ဆောင်ပေးခဲ့လဲလို့မေးရင် ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်တွေကို ပဲ လက်ညိုးထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းစေတီပုထိုးတွေ၊ ဘုရာကျောင်းကန်တွေ၊ ကျောက်စာ တွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားလှတဲ့နိုင်ငံကြီး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိခွင့်၊ ကြွားခွင့်ရတော့ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရပ်က ကျွန်တော်တို့ကို ဂုဏ်ဆောင်ပေးတဲ့ ပညာတစ်ခုလိုမြင်လာပါတယ်။ Live The Dream ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာလည်း ရှေးဟောင်းသုတေသနကို လေ့လာနေတဲ့သူ (သို့) လေ့လာလိုသူတွေ ရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနဘာသာရပ်အားဖြင့် ရှေးခေတ် လူမျိုးစု၊ ရှေးခေတ် နိုင်ငံတွေရဲ့ လူနေမှုပုံစံတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိလှတဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဘာသာရပ်အကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ ဆိုတာဟာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနှင့် အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြွင်းအကျန်များကို တူးဖော်လေ့လာခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် လူ့သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကို လေ့လာရတဲ့ ဘာသာရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ ကျောက်ခေတ်၊ ကြေးခေတ်၊ သံခေတ် စတဲ့ ခေတ် အဆက်ဆက်အလိုက် ကျန်ရှိခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်း လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊ အဆောက်အအုံတွေ၊ ကျောက်စာတွေ၊ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် သုတေသနပညာရပ်တွေ၊ မြန်မာကျောက်စာတွေ၊ ဟိန္ဒူအနုပညာနှင့် ဗိသုကာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အနုပညာနှင့် ဗိသုကာ၊ အရှေ့တောင်အာရှ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသန အထောက်အထား သက်သေများမှ တစ်ဆင့် ရှာဖွေလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်းနည်းလ/ဘမ်းများ၊ ဥရောပယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသနသမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့ ရှေးဟောင်းသုတေသနသမိုင်း စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်.
၂။ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ
လူမှာအမျိုး၊ ကြက်မှာအရိုးဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကိုယ့်အမျိုးရဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာ အမွေအနှစ်တွေကို ခုအချိန်မှာ သိခွင့်ရတာ၊ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ? ဆိုတာကို သမိုင်းကြောင်းထောက်ပြီး ပြောပြခွင့်ရတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်တွေမှ မရှိရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားတိုးတက်လာတဲ့အကြောင်းတွေ၊ ရှေးမြန်မာတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းကြောင်းတွေကို ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရမယ်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုက ဘာလဲ? ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြမလဲ? ဆိုတာတွေကို နားလည်နိုင်တာက ရှေးဟောင်းသုတေသနသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်များရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိတဲ့ အရာက အပိုင်းသေးသေးလေးဖြစ်နေပါစေ ခေတ်တစ်ခေတ်ရဲ့ ကျင့်သုံးတဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ၊ လူတန်းစားအသီးသီးရဲ့ လူနေမှုစနစ်တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အချက်အလက်တွေကနေတစ်ဆင့်အနာဂတ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ? လူနေမှုစနစ်တွေ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်မလဲ? ဆိုတာကို နည်းလမ်းရှာနိုင်လို့ ရှေးဟောင်းသုတေသန နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်သာမက နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမျိုးများအတွက်ရော၊ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ လူမျိုးအသီးသီးအတွက်တော့အရေးပါလှပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးသွားတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုရရှိလာနိုင်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်တာကြောင့် နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတွက်လည်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အရေးပါတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၃။ရှေးဟောင်းသုတေသန နှင့် လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်
ရှေးဟောင်း သုတေသန လုပ်ငန်းဟာ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိူးပြုနေတယ် ဆိုတာ ကတော့ ငြင်းဆိုဖွယ်ရာ မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်က နေရာ ဒေသ အသီးသီးမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ လူမျိုးတွေ ယဉ်ကျေးမှု တွေနဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို လေ့လာရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် လူမျိုးရဲ့ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းတွေ လေ့လာ ကြတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှေးဟောင်းသုတေသီ တွေရဲ့ သုတေသန ပြုလုပ်မှု သက်သေတွေသာ မရှိခဲ့ရင် ဒါတွေဟာ ယုံတမ်းပုံပြင်သာ သာ အနေနဲ့ သာ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရပ်ကြောင့် နိုင်ငံ ရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တွေမှာ လည်း သိသာ ထင်ရှားတဲ့ အကျိုုး သက်ရောက်မှု တွေလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။ မြန်မာ လူမျိုုးတွေရဲ့ တန်ဖိုးထားရာ ပြယုဒ် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ပုဂံ မြို့ တော် ဟာ ဆိုရင်လည်း ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ် ခမ်းနားစွာ တည်ရှိနေတဲ့ အတွက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ က ဧည့်သည် တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းလှပါတယ်။ ဒီလို အားဖြင့် ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု တွေ များတဲ့ အခါမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ အပြင် ဒေသခံတွေရဲ့ စီးပွားရေး နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး စတဲ့ ကဏ္ဍတွေအထိမှာ အကျိုးပြုနေနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အနာဂတ် မှာ
ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရပ်ဟာ နိုင်ငံ နဲ့ လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ ပညာရပ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ အသီးသီးမှာဆိုရင်လည်း ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေကို လက်ရှိမျိုုးဆက် နောင်မျိုးဆက်တွေ အတွက် ရည်မှန်းပြီး အမြတ်တနိူး တန်ဖိုးထားကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်လည်း ပွင့်လင်း လာတာနဲ့ အမျှ အဆောက်အအုံဟောင်းတွေ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ် အဟောင်းတွေကို ပြန်လည် မွမ်းမံ ခြင်းတွေ ရှိလာကြပါတယ်။ အနုပညာဆိုတာလည်း စက်ဝိုင်းလုံး တစ်ခုလို လည်ပတ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ခေတ်က အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းတွေ သီချင်းတွေ ပြန်ခေတ်စားလာသလိုပဲ ရှေးဟောင်းအနု ပညာ လက်ရာ အမွေအနှစ်ဆိုတာ ဟာလည်း တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ မျိူးဆက်သစ် လူထု အတွက်တော့ အဖိုးမဖြတ် နိုင်စရာပါပဲ။ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် အနုပညာ လက်ရာတွေ ဟာ လူသားတွေ ကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်။ နိုင်ငံ အချင်းချင်း ပြန်ပြီး နွေးထွေးလာစေ တယ်။ မတူညီကွဲ ပြားမှု တွေ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အသိအမှတ် ပြုပေးလာနိုင်ကြတဲ့ အတွက် ရှေးဟောင်းအမွေ အနှစ် တွေကို ထိန်း သိမ်း စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့ အထူးလိုအပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောင် အနာဂတ် ကာလမှာလည်း လူသားတွေကို နယ်ပယ်အသီးသီး ကနေ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်သော်လည်းကောင်း အကျိုးပြုပေးနေတဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသန ဘာသာရပ်ကို မြတ်နိုးတန်ဖိုး ထား တတ်ကြတဲ့ လူငယ် လူရွယ်များ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါစေ လို့ တောင်းဆုချွေရင်း နိဂုံးချူပ်လိုက်ပါတယ်။